Chili Piper: Fampandehanana mandeha ho azy amin'ny fandaharam-potoana ho an'ny fiovam-pitarihana miditra | Martech Zone
Chili Piper: fampiharana fandaharam-potoana mandeha ho azy ho an'ny fiovam-po inbound
Talata, Jolay 21, 2020 Alakamisy Oktobra Oktobra 1, 2020 Jason Oakley
Miezaka manome ny volako aminao aho - maninona no dia ataonao mafy toy izao?
Izany dia fahatsapana iraisan'ny mpividy B2B maro. Taona 2020 izao - maninona isika no mbola mandany fotoana amin'ny mpividy (sy ny fotoantsika manokana) amin'ny fomba fahagola maro be?
Ny fivoriana dia tokony haharitra segondra vao hamandrihana fa tsy andro.
Ny hetsika dia tokony ho an'ny resaka misy dikany fa tsy aretin'andoha.
Ny mailaka dia tokony ho voavaly amin'ny minitra vitsy, fa tsy ho very ao amin'ny boaty.
Ny fifandraisana rehetra amin'ny dia ataon'ny mpividy dia tokony tsy hisy ady.
Saingy tsy izany.
Ny Chili Piper dia eo am-panatanterahana iraka hanatanterahana ny fividianana (sy fivarotana) izay tsy dia maharary loatra. Izahay dia mijery ny famerenana amin'ny laoniny ny rafitry ny hetsika ampiasain'ny ekipa fidiram-bola - hanamboarana izay rehetra halanao momba ny fivoriana, hetsika ary mailaka - hahafahanao mandany fotoana bebe kokoa amin'ny fandraisana andraikitra.
Ny vokatr'izany dia ny famokarana bebe kokoa, ny tahan'ny fiovam-po bebe kokoa ary ny fifanarahana mihidy kokoa.
Manana andalana vokatra telo izahay izao:
Ny fihaonan'ny sakay dia manome ny vahaolana haingana indrindra sy feno indrindra ho an'ny indostria amin'ny fandaharam-potoana sy fandefasana mandeha ho azy ny fivoriana isaky ny dingana rehetra amin'ny androm-piainan'ny mpanjifa.
Scenario 1: Fandaharam-potoana miaraka amin'ny fitarihana miditra
olana: Rehefa mangataka doka amin'ny tranokalanao ny prospect dia efa 60% izy ireo amin'ny alàlan'ny fizotry ny fividianana ary vonona ny hiresaka am-pahalalana. Fa ny eo ho eo ny valiny dia 48 ora. Amin'izay fotoana izay dia nifindra tany amin'ny mpifaninana aminao ny fanantenanao na nanadino tanteraka ny olan'izy ireo. Izany no antony tsy ahazoana famandrihana mihitsy ny 60% -n'ny fangatahana fivoriana miditra.
vahaolana: Concierge - fitaovana fandaharam-potoana miditra miditra ao anaty Fivorian'ny Chili. Concierge dia mpandrindra an-tserasera izay mifangaro mora foana amin'ny endrika tranonkala misy anao. Vantany vao natolotra ny taratasy, mahafeno ny fepetra ny Concierge, manitsy azy any amin'ny mpivarotra marina, ary mampiseho mpandrindra fizotran'ny tena tsotra ho an'ny fahatsinjovanao hamandrika fotoana iray - segondra vitsy monja.
Scenario 2: Fandaharam-potoana manokana amin'ny alàlan'ny mailaka
olana: Ny fandaharana fivoriana amin'ny alàlan'ny mailaka dia dingana mahasosotra, mandray mailaka miverina marobe hanamarina fotoana iray. Ny fanampiana olona marobe amin'ny fampitoviana dia tena tsy azo atao mihitsy. Ny tsara indrindra, mila andro maromaro ny famandrihana fotoana iray. Ny ratsy indrindra dia milavo lefona ilay nasainao ary tsy hitranga mihitsy ny fihaonana.
vahaolana: Instant Booker - fivoriana misy olona marobe, voatokana amin'ny mailaka amin'ny tsindry iray. Instant Booker dia fanitarana fandaharam-potoana amin'ny Internet (misy amin'ny G Suite ary Outlook) izay ampiasain'ny solo-draharaha hamandrihana fivoriana haingana amin'ny alàlan'ny mailaka. Raha mila mandrindra fivoriana ianao dia makà fotoana fivoriana misy vitsivitsy ary apetraho amin'ny mailaka amin'ny olona iray na maromaro izy ireo. Izay mandray dia afaka manindry ny iray amin'ireo fotoana natolotra ary mahazo mamandrika ny rehetra. Tsindrio iray ary dia izay.
Scenario 3: Fandaharam-potoana fiantsoana antso an-tànana
olana: Ny fandaharam-potoana fivoriana handraisana (aka. Fanolorana, mari-pahaizana, sns.) Dia dingana mandroso sy miverina. Ny teboka fizarana mahazatra eo anelanelan'ny SDR sy AE (na AE mankany CSM) dia fivoriana voatahiry. Saingy ny fitsipiky ny fitsinjarana fitarihana dia manahirana ny fametrahan'ny repoblika fivoriana haingana ary mitaky takelaka amin'ny tanana. Izany dia miteraka fahatarana sy tsy fampisehoana, fa manampy koa ny mety hisian'ny fanaparitahana firaka tsy ara-drariny, ny olan'ny fampisehoana ary ny fitondran-tena ratsy.
vahaolana: Instant Booker - fivoriana fivorian'ny boky na aiza na aiza segondra. Ny fanitarana 'Instant Booker' anay dia mifamatotra amin'ny Salesforce, Gmail, Outlook, Salesloft, sy ny maro hafa, ka afaka mamandrika fivoriana avy amin'ny toerana rehetra ny segondra. Ny làlana dia alefa ho any amin'ny tompony marina ka ny reps dia afaka mamandrika ireo fivoriana handoff amin'ny kalandrie mety, isaky ny mandeha, fa tsy mila mikaroka amin'ny takelaka.
Mangataha Demo Chip Piper
Miaraka amin'ny Chili Events, mora ho an'ny mpivarotra hetsika ny manome antoka ny famandrihana fivoriana mialoha ny hetsika ho an'ny solo-barotra, ny fanomezana tombony azo antoka sy mandeha ho azy naterak'ireo fisehoan-javatra manokana ireo, ary ny fitantanana eo an-toerana ny fanovana ny fandaharam-potoana farany farany sy ny fisian'ny efitrano.
Scenario 1: Fivoriana hetsika mialoha ny famandrihana
olana: Mialoha ny hetsika iray, ny ankamaroan'ny mpiasan'ny varotra dia mila mandamina ny fivorian'izy ireo amin'ny tanana. Midika izany fa mailaka mandroso sy miverina miaraka amina vinavina manandrana mandrindra ny kalandrie sy ny efitrano fivoriana. Raha atambatra, izany dia miteraka aretin'andoha sy fikorontanana ho an'ny solo, mpanjifa ary mpitantana hetsika - mpilalao manan-danja izay mila mitantana ny fahaizan'ny efitrano fivoriana ary hahafantatra izay fivoriana mitranga, rahoviana. Ity dingana iray manontolo ity dia matetika tantanana anaty takelaka.
vahaolana: Miaraka amin'ny Chili Events, ny repoblika tsirairay dia manana rohy famandrihana tokana azon'izy ireo zaraina amin'ny prospect alohan'ny hetsika - manao ny fandaharam-potoana sy ny fandrindrana ny efitrano ho dingana iray tsindry. Ny fivoriana voatokana dia ampiana amin'ny Kalandrie Check-In ihany koa - Kalandrie afovoany izay ampiasain'ny mpitantana hetsika hanarahana ny fihaonana rehetra mitranga eo amin'ny sehatry ny hetsika.
Scenario 2: Tatitry ny fihaonambe ary ROI
olana: Mpitantana hetsika (ary mpivarotra hetsi-panoherana) no mitolona amin'ny fivorian'ny hetsika ao Salesforce ary manaporofo ny hetsika ROI. Ny fanarahana ny fivoriana rehetra amin'ny kaonferansa dia dingana iray tena manual ho an'ireo mpitantana hetsika. Mila manenjika ireo solo-barotra izy ireo, mitantana kalandrie marobe, ary mitazona ny zava-drehetra ao anaty takelaka. Misy ihany koa ny fizotry ny tanana amin'ny fanampiana ny fivoriana tsirairay amin'ny hetsika amin'ny Salesforce izay mitaky fotoana. Fa ilaina daholo izany mba hanaporofoana ny ROI.
vahaolana: Ny Chili Events dia miray tsikombakomba amin'ny Salesforce, noho izany dia isaky ny fivoriana voatokana dia arahana ho azy eo ambanin'ny fampielezan-kevitra. Ny Kalandrie Check-in anay dia manamora ho an'ny mpitantana ny hetsika ihany koa ny manara-maso tsy fampisehoana ary manavao ny fanatrehana fivoriana ao amin'ny Salesforce. Izany dia manamora kokoa ny fanaovana tatitra momba ny hetsika ROI ary mametraka ny fifantohany amin'ny fanaovana hetsika lehibe.
Chili Inbox (amin'izao fotoana izao amin'ny beta manokana)
Ho an'ny ekipa fidiram-bola izay mampiasa mailaka hifaneraserana amin'ireo prospect sy mpanjifa, ny Chili Piper Inbox dia manome fomba tsotra sy mahomby ary mitambatra ho an'ny ekipa hiara-miasa amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa bebe kokoa, ny fahitana ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa, ary ny fanomezana traikefa ananan'ny mpanjifa tsy misy friksi.
Scenario 1: Fiaraha-miasa anatiny manodidina ny mailaka
olana: Ny mailaka anatiny dia mikorontana, misafotofoto ary sarotra tantanana. Very ny mailaka, mila mamily ny CC / Forward an-jatony ianao, ary miafara amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny Internet na amin'ny chat izay tsy misy na inona na inona voarakitra ary tsy misy zavatra voarakitra.
vahaolana: Fanamarihana Inbox - endri-tsoratra mailaka iaraha-miasa ao anatin'ny Inbox Chili. Mitovy amin'ny fomba fiarahanao miasa ao amin'ny Google Docs, ny lohateny Inbox Comments anao dia ahafahanao manasongadina lahatsoratra sy manomboka resaka amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipanao ao amin'ny boaty fampidirana anao. Mora ny manodina ireo mpikambana ao amin'ny ekipa hahazoana hevitra, fanampiana, fankatoavana, coaching ary maro hafa.
Scenario 2: Mitady ny hevitry ny kaonty
olana: Raha te hahafantatra marina izay nitranga tamin'ny kaonty iray talohan'ny nandovanao dia mitaky asa maharitra mandreraka mandritra ny ora maro amin'ny alàlan'ny hetsika Salesforce, famerenana ireo hetsika amin'ny fitaovam-pivarotana Sales Engagement, na fanasivanana ny CCs / Forwards ao amin'ny boaty fampidiranao.
vahaolana: Kaonty momba ny kaonty - endri-pitsikilovana mailaka ao anaty Inbox Chili. Amin'ny Chili Inbox, azonao atao ny miditra amin'ny tantaran'ny mailaka amin'ny ekipa amin'ny kaonty rehetra. Ny endri-javatra momba ny Kaonty momba ny kaonty dia mamela anao hiditra haingana amin'ny takalo mailaka rehetra amin'ny kaonty manokana, avy ao anatin'ny boaty fampidirana anao izany. Izany dia manamora ny fanatonana ny mailaka rehetra amin'ny toe-javatra ilainao.
Momba ny Chili Piper
Niorina tamin'ny 2016, Chili Piper dia iraka hanao fivoriana sy hiara-miasa amin'ny mailaka ho an'ny orinasa.
Ny Chili Piper dia mifantoka amin'ny fandefasana automatique ny fizotrany taloha amin'ny fandaharam-potoana sy ny mailaka izay miteraka fikorontanana tsy ilaina sy ny fidinana amin'ny fizotry ny varotra - ka nahatonga ny fiakaran'ny vidim-bokatra sy ny taham-panovana manerana ny fantsona.
Tsy toy ny fomba nentim-paharazana fitantanana fitarihana fidirana, Chili Piper dia mampiasa fitsipika marani-tsaina mba hahafeno fepetra sy hizara fitarihana mankany amin'ny repoblika mety amin'ny fotoana tena izy. Ny rindrambaiko nomanin'izy ireo dia mamela ny orinasa hivezivezy amin'ny alàlan'ny SDR ka hatrany amin'ny AE ary hamandrika fivoriana amin'ny fanentanana ara-barotra sy hetsika mivantana. Miaraka amin'ny tranonkalany napetraka manaraka amin'ny mailaka, Chili Piper dia nanambara ny Chili Inbox, boaty iraisan'ny mpiara-miasa ho an'ny ekipa fidiram-bola.
Ny orinasa toa ny Square, Twilio, QuickBooks Intuit, Spotify, ary Forrester dia mampiasa ny Chili Piper hamoronana traikefa mahatalanjona ho an'ny fitarihan'izy ireo, ary ho setrin'izany, ahodino ho avo roa heny ny isan'ny fitarika ho fivoriana.
Tags: fivorian'ny bokyhetsika sakayboaty sakayfivoriana sakaypiper sakayautomation emailG Suitegsuitefandaharam-potoana firaketana fidiranafandaharam-potoana miditrafitarihana fitarihanafivoriana aleha
Jason Oakley dia talen'ny varotra vokatra ao amin'ny Chili Piper. Jason dia mpivarotra vokatra efa za-draharaha miaraka am-pitiavana vokatra, SaaS, fandraharahana ary fahombiazan'ny mpanjifa. Tao anatin'ny 10 taona niasana tamin'ny fanombohana kely na salantsalany, Jason dia nanararaotra naneho fahombiazana tamin'ny varotra lehibe sy ny asany amin'ny marketing, nahafahany lasa mpivarotra vokatra mahay mitady ny hahatakatra ny dia nataon'ny mpanjifa iray manontolo.
Ohatra amin'ny Pop-ups Exit-Intent izay hanatsara ny tahan'ny fiovam-ponao
Fantsona: Manangona, manova, ary manaova tahiry marketing